Google dia mampiroborobo ny fampiharana Duo miaraka amina fanangonana horonantsary mahafinaritra | Androidsis
Niverina niloka tamin'ny fandefasan-kafatra hafatra sy fifandraisana i Google. Vao tsy ela akory izay no nanangana ny Duo, fampiharana iray hanaovana antso an-tsary izay ny fahatsorana sy ny hafainganana dia be indrindra.
Na dia azo lazaina aza fa ny fampiharana Google amin'ny resaka fandidiana dia miavaka hatrany amin'ny fahasarotiny, tsy izany no izy. Ilay fampiharana vaovao Duo tsy mety ho tsotra kokoa ampiasaina. Ary izany no mahatonga ny orinasa hampiroborobo azy amin'ny andiana clip fohy sy tena tsara.
1 Duo, fanentanana iray tany am-boalohany sy tsotra
1.1 Antso an-dahatsary notsorina
1.2 Fahamaimaizana, fahatsorana ary filaminana
Duo, fanentanana iray tany am-boalohany sy tsotra
Ny tena mampiavaka an'i Duo, "Knock Knock", dia misy topi-maso kely izay mamela ireo mpampiasa mahazo antso mba hijery topy izay miantso azy ireo alohan'ny hanombohan'ny antso.
Mba hahatonga ny sary mihetsika ho mahafinaritra sy mahafinaritra kokoa, dia nisafidy ilay goavambe Mountain View maka tahaka ny zavatra izay kintan'ireto clip fohy momba an'i Duo ireto. Ny borosy nify sy ny nify, ny dibera ary ny jelly, na latte no resahina. Amin'ny maha-vis azy ireo dia mandeha roa isaky ny roa izy ireo, manamafy ilay hevitra momba an'i Duo miorina amin'ny antso an-tsary iray.
Ary mba hamenoana azy dia mampiasa ny diezy #BeADuo izy, mba tsy hisy toerana hisalasalana na kely aza.
Ho fanampin'izay, Google dia tsy te-hitsahatra tsy hahatadidy an'izany Duo dia rindrambaiko marobe. Mba hanazavana izany, amin'ireo horonan-tsary hasehonay anao eto ambany, ny finday finday Android toy ny Nexus dia nampiasaina, ary koa ny fitaovana iPhone. Ary i Duo dia misy maimaim-poana ho an'ny Android sy ny iOS, na izany aza, amin'ity sehatra farany ity dia tsy manana io fijerena maso io izay nolazaiko teo aloha.
Antso an-dahatsary notsorina
Iray volana katroka taorian'ny namotsoran'i Google ny Duo ho an'ny iOS sy Android. Araka ny efa nolazainay, ny fampiharana fifandraisana vaovao Duo Ny iraka ifotony dia ny fanamorana ny karazana fampiharana fandefasan-kafatra. Noho io antony io, na eo aza ny fisian'ny safidy sasantsasany toy ny fanovana eo anelanelan'ny fakan-tsary voalohany sy ny fakantsary fakan-tsarobidin'ny finday avo lenta, na ny fampiatoana sy ny famonoana ny mikrô, dia misy zavatra kely sisa azontsika atao.
Miaraka amin'i Duo, Google dia naniry ny hifantoka amin'ny antso an-tsary ny fampiharana, ary noho izany antony izany dia tsy mikasa zavatra hafa ankoatr'izay izy, ny antso an-tsary eo anelanelan'ny mpampiasa ho tsotra, haingana ary azo antoka araka izay azo atao. Ary ho an'ny fahamendrehana ambony indrindra, Duo dia manolotra rafitra iray an'ny encryption farany-to-farany, noho izany dia heverina ho azo antoka ny fiainantsika manokana.
Fahamaimaizana, fahatsorana ary filaminana
Iray amin'ireo tombony lehibe atolotry ny fampiharana antso an-tsarimihetsika vaovao an'i Google ny manomboka avy hatrany ny resadresaka aorian'ny nandraisan'ny mpandray ny antso an-tsary. Voalohany, ilay olona mahazo antso dia afaka mahita topy mason'ilay miantso, na izay ifantohany amin'izao fotoana izao. Fa io fiasa io dia tsy ho tanteraka amin'ireo olona izay notahirizinao taloha ho toy ny fifandraisana ao amin'ny telefaona findainao.
Ilaina ihany koa ny mahatadidy fa hisoratra anarana ho an'ny serivisy ary afaka mampiasa azy, toy ny amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra hafa toy ny WhatsApp, ilaina ny fananana nomeraon-telefaona mavitrika.
Duo dia mampiasa WebRTC ary nohamarinina ho an'ny fifandraisana miadana. Ny kalitaon'ny antso dia ahitsy, lojika, amin'ny toetoetran'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra. Ho fanampin'izay, amin'ny kinova ho an'ny Android sy iOS, ny fampiharana Azonao atao ny miova eo anelanelan'ny fifandraisana data sy ny WiFi any aoriana nefa tsy manelingelina ny fifandraisana.
Ary na dia niaraka taminay nandritra ny iray volana aza i Duo ary nanokana fanentanana dokam-barotra tany am-boalohany i Google, mbola miandry ny famoahana ny Salama, fampiharana fandefasan-kafatra hafa izay miharihary fa tsy hampiasa enkripsi end-to-end. Raha ny fitsipika dia navotsotra i Allo tamin'ny fahavaratra, ary na eo aza amin'ny lafiny teknika dia mbola eo amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika, toa mbola tara ihany izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google dia mampiroborobo ny fampiharana Duo miaraka amina fanangonana horonantsary mahafinaritra